Global Voices teny Malagasy » Arabia Saodita: Mitsingilahila Ny Ampitson’i Hamza Kashgari, Mpanao Gazety · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Febroary 2012 4:23 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Azia Atsinanana, Arabia Saodita, Malezia, Fahalalahàna miteny, Fifandraisana iraisam-pirenena, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Nahatonga tsela-baratra tao amin'ny media sosialy i Hamza Kashgari, Saodiana iray mpanao gazety, rehefa nitoraka bitsika mikasika resaka noforonin'ny saina niarahana tamin'ilay Mpaminanilahy Mohammed ny tenany. Anatin'ireo bitsiny, izay voafafa, nanoratra tamin'ilay mpaminanilahy izy: “Tiako ny mpanohitra ao anatinao” nefa “tsy tiako ny aloky ny fahamasinana manodidina anao. Tsy hivavaka ho anao aho.” Nanoratra ihany koa izy, “Handray [ny tananao] toy ny fanaon'ireo mitovy antsika aho … Hiresaka aminao tahaka ny namako aho, fa tsy mihoatra noho izay.”
Tsy ela taorian'ny namoahany ireo bitsika ireo, nanomboka nahazo fandrahonana ho faty i Kashgari. Navoaka tanatinà vohikala media sosialy iray ny adiresiny, ary nanomboka nitaky ny hanamelohana ho faty azy ireo mpitarika fivavahana, na ny fanalàna azy tsy ho mpino intsony. Ny 8 Febroary, nandositra ny firenena izy, nizotra nankany Nouvelle-Zelande…nefa tratran'ireo manampahefana tany an-toerana rehefa nandalo tany Malezia, izay nitazona azy; fotoana fohy taorian'izany, nivoaka ny vaovao fa hoe nandefa baiko fampodiana an-tanindrazana azy i Arabia Saodita.
Voatonona  ho nilaza ny hampodian'i Malezia an’ i Kashgari an-tanindrazana any Arabia Saodita ny Minisitry ny Atitany Maleziana, Hishammudin Hussein. Misy pejy Facebook  entina hanehoana ny firahalahiana amin'i Kashgari natsangana tamin'ny tapaky ny herinandro izay ary manana mpikambana mihoatra ny 1,500.
Amin'ny fotoana hamoahana ity lahatsoratra ity, misy baiko vonjimaika navoaka mba hanakanana ireo manam-pahefana Maleziana tsy hampody an'i Kashgari:
@FadiahNadwa : Namoaka baiko vonjimaika ny mpitsara Rohana Yusuf mba hanakanana ny governemanta tsy hampody an'i #HamzaKashgari ho any Arabia Saodita. An-dalam-panomezana ny baikon'ny fitsarana ho an'ny mpitandro filaminana.
Nisy ihany anefa ireo vaovao mifanohitra amin'izany milaza fa efa noroahana i Kashgari.
Adin'ny fomba fihevitra
Misy adin'ny fomba fihevitra mipoitra any amin'ireo tambajotra sosialy, ary maro ireo Saodiana mpiray tanindrazana amin'i Kashgari izay manohy mangataka ny hitsarana azy. Toa mbola vitsy noho ny avy any amin'ireo mpikambana ao amin'ny fikambanambe iraisam-pirenena, sy ireo olom-pirenena any Arabia Saodita sy Malezia ny feon'izy ireo, ny amin'ny tsy hampodian'i Malezia an'i Kashgari an-tanindrazana.
Mino  ilay Saodiana mpitoraka bilaogy Ahmed Al Omran fa mihoatra noho ny fifampijerijerena ity raharaha ity:
Raha mahatakatra ny antony mahatonga ny ankamaroan'ireo Silamo maro hisafoaka aho raha vao misy zavatra mahakasika mpaminany, tsy heveriko ho manazava ny tantara manontolo izany. Eny, maro ireo hentitra amin-javatra tahaka izao ary mihetsika mifanaraka amin'izany. Nefa na eo aza izany, mazava fa maro ireo avy ao amin'ny havanana no nanapa-kevitra ny hanararaotra an'ity tranga ity mba hanangonana isa sy hisintonana tombotsoa politika. Voankazo mora otazana rahateo izany.
Raha ny sasany mahita ireo mpitahiry finoana miaro ny voninahitry ny mpaminany satria mitsetra azy, ny hafa kosa milaza fa mbola misy zavatra hafa ambadika izany, fa ampahana paikady ela noketrehina io raha ny marina.
Mariam, mpanoratra iray ao amin'ny Arab News, dia mihoron-koditra amin'ireo sazy mafonja :
@onlymytweets : Tsy mahatadidy Ayah na Hadith iray aho niteny fa namindra ny fahefana tamin'ny olombelona mba hitsara Andriamanitra. Sa izaho irery ve no mahatsikaritra izany? #HamzaKashgari @SalmaanTaseer
Ilay poeta Saodiana Amerikana Bint Talal dia nitoraka bitsika ny ahiahiny momba ny ho fitonian'i Kashgari. Mibitsika izy:
@majda72 : Te-hatory aho nefa kikisan'ny tahotra aho ny amin'i #HamzaKashgari Manohy mitsikilo ny twitter & mieritreritra ny ratsy aho.
Tezitra amin'ireo fihetseham-po ao amin'ny media sosialy i @RFatani , mitoraka bitsika:
@RFatani : mpitoraka bitsika an'arivony no mangataka ny hikorisàn'ny lohan'i #HamzaKashgari amin'ny tany! Tokony voaroaka anatin'ireo firenena izay manana lalàna momba ny ‘famporisihana hankahala’ ireny olona ireny
Naneho ny fihetseham-po miparitaka ny bitsik'ilay mpanoratra Khaled Almaeena , milaza fa tsy mifanaraka amin'ny heloka bevava vita ireo sazy eritreretina:
@khaledalmaeena : Miantra Andriamanitra ary raha velona i Mohammed (PBUH) dia nihaino ny fialan-tsininy sy namela ny helony.”
Anisan'ireo any Arabia Saodita izay faly naheno fa mety hampodiana an-tanindrazana i Kashgari dia i @AboTamem, izay nitoraka bitsika:
@AboTamem : @nsurendrann An-dalam-podiana ny ralahalantsika HAMZA…tsy eo ambanin'ny lalànareo izy!! #hamzakashgari
Nahatsapa ihany koa i @mkabmr  fa lasa lavitra i Kashgari:
@mkambr : Raha izaho manokana dia olona tsy misy ilàna azy izay rehetra manala baraka ny mpaminany Muhammad PBUH #HamzaKashgari
Fa ny bitsik'i @ArabRevolution no tena taratry ny fihetseham-po amin'ny ankapobeny ao amin'ny Twitter:
@ArabRevolution : Milaza fotsiny aho fa, na izaho na ieo Silamo an-tapitrisany dia tsy miombon-kevitra amin'izay mety hataon'i Arabia Saodita amin'i #HamzaKashgari #freehamza
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/02/18/28843/
 pejy Facebook: https://www.facebook.com/groups/217865731642049/